Thola amadolobha amahle kakhulu eCantabria | Izindaba Zokuhamba
Amadolobha amahle kakhulu eCantabria
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, Impelasonto
ICantabria umphakathi osenyakatho yeSpain lokho kusinikeza zonke izinhlobo zamathafa, kusuka emabhishi asendle kuya ezindaweni ezinhle zezintaba. Ngaphandle kwamadolobha afana neSantander, kunamadolobha amaningi amahle angatholwa impela. Kulo mphakathi kunamadolobha amaningi anendlela yokuphila ethule lapho ungajabulela khona imigwaqo yakudala, izikhumbuzo nezindawo zemvelo.
I-Los amadolobha amahle kakhulu eCantabria Bazosinikeza ngazo zonke izinhlobo zezindawo ezibukeka kahle, futhi bonke banokuthile okukhethekile abazokwenza ukubaleka ngempelasonto. Uma ufuna ukwazi iCantabria ngokuningiliziwe, into enhle ukudlula kula madolobha ukuze ujabulele ubuqiniso.
1 ISantillana del Mar
2 Izimpawu zokucaphuna
4 UCastro Urdiales
5 ISan Vicente de la Barquera
ISantillana del Mar
ISantillana del Mar ithathwa njengelinye lamadolobha amahle kakhulu eCantabria, yingakho iyindawo yayo yokuqala. Isikhungo sayo esinomlando sinezindlu eziningi ezihloniphekile noma izigodlo ezisitshela ngokubaluleka kwaso. ICasa de los Alonso noma iCasa de los Villa yizibonelo zalesi sakhiwo esihle. EPlaza Ramón Pelayo yiwona Imibhoshongo kaDon Borja neMerino. Lezi yizakhiwo ezibaluleke kakhulu zangenkathi ephakathi edolobheni. Ngakolunye uhlangothi, akufanele uphuthelwe ukuvakashela iSonto LaseCollegiant laseSanta Juliana, elithathe isikhundla sezindela ngegama elifanayo ngekhulu le-XNUMX. Okuhle kunakho konke kungaphakathi, lapho ungabona khona i-cloister enhle yase-Romanesque.
Uma sikhuluma ngeSantillana del Mar kufanele sisho ne emihumeni yase-Altamira, njengoba kukuleli dolobha lapho zitholakala khona. Umhume odumile utholakala ngaphakathi kwezizathu ze-Altamira National Museum kanye neSikhungo Sokucwaninga.
Eduze kweSantillana del Mar leli dolobha, elinamagugu wokwakha athakazelisayo. Abaculi abaqotho bokwakhiwa kwesimanjemanje njengoGaudí basebenze kuleli dolobha. Edolobheni kufanele uvakashele iSobrellano Palace, okuyisakhiwo se-neo-Gothic esinikeza izinkambo eziqondiswayo. Isonto leMarquis laseComillas libuye libe nesitayela esihle seNeo-Gothic. Kepha ngaphandle kokungabaza cishe wonke umuntu uza kuleli dolobha ukuzobona owaziwa kakhulu Inhloso kaGaudí. Le ndlu yaklanywa nguGaudí ukuba ibe yindawo yokuhlala umculi wangaleso sikhathi. Lesi sigodlo singavakashelwa ngaphakathi, ngokwakho futhi nohambo oluqondisiwe ukuthola wonke amakhona nemininingwane.
Amaphothi angaphansi kwesifunda saseLiébana, eduze nePicos de Europa. Ezindaweni ezizungezile ungavakashela iSigodlo Santo Toribio de Liébana noma uthathe nemizila edlula ePicos de Europa. Edolobheni ungabona isonto laseSan Vicente elinama-altare e-baroque. I- I-Infantado Tower Ingesinye sezakhiwo ezibaluleke kakhulu, namuhla esisebenza njengehholo ledolobha futhi njengendawo yemiboniso. Kepha uma kukhona ongakwenza ePotes, wukuzivumela uhambe uzulazule edolobheni lakubo elidala. Amabhuloho amatshe, imigwaqo emincane nomoya wendabuko uwenza ubaluleke phakathi kwamadolobha amahle kakhulu eCantabria.
ICastro Urdiales ingenye yalezi zindawo okufanele uvakashele kuzo, ezinamabhishi amahle nezindawo onentshisekelo kuzo. Isonto lekhulu le-XNUMX laseSanta María de la Asunción lingenye yezindawo okufanele kubonwe kuzo, njengoba kwakungenye yezakhiwo zokuqala zamaGoth emphakathini. I- Isigodlo noma iNqaba yase-Ocharan Kungokunye okumele ukubonwe, okunikeza ukuxuba kwezitayela, kusuka kuNeo-Gothic kuye kuNeo-Mudejar.
ISan Vicente de la Barquera iyindawo ogwini enikeza ngayo izindawo ezinhle zemvelo. Inamabhishi amaningi, ngakho-ke kuwumqondo omuhle ukuwuvakashela ehlobo ukujabulela ngokugcwele okuhehayo. Amabhishi afana ne-El Rosal, iLa Maza noma i-El Tostadero ayizibonelo ezinhle. I- IMaza Bridge Kuyindlela enhle engeyokwakhiwa kwezikhathi zasendulo futhi enqamula ichweba, enikeza isithombe esihle sedolobha. Edolobheni kufanele uvakashele Isigodlo SaseSan Luis esakhiwe ngesitayela esihle seGothic. Umbhoshongo waseProvost ungumbhoshongo wekhulu le-XNUMX lapho kunemibukiso yesikhashana, yize kwakukhona isikhathi lapho kwakuyijele. Isonto laseSanta María de los Ángeles liyisakhiwo esihle kakhulu senkolo. I-El Castillo del Rey ingelinye lamaphuzu ayo abalulekile, isakhiwo sokuzivikela ngaphezulu kwedolobha.
ILaredo ibiyisizwe esibalulekile sokuzivikela, yingakho izinsalela zodonga oludala zisalondolozwe esikhungweni sazo esingokomlando. Kule ndawo kufanele uvakashele i- Isonto le-Our Lady of the Assumption, ithempeli lesitayela seGothic elinama-altare amahle afana neVirgin of Bethlehem. Endaweni yakudala, ebizwa ngePuebla Vieja, ungabona izindawo ezifana nePalacio de Arzauz noma iConvent yaseSan Francisco.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Impelasonto » Amadolobha amahle kakhulu eCantabria